विदेशबाट फर्केकालाई सहुलियत ऋण ,पाउन कति सहज ? | Pardehshilife
पछिल्लो समय सरकारले विदेशबाट फर्केका कामदारलाई सहुलियत ऋण दिने कुरा निकै चर्चामा छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुले यसलाई स्वागतयोग्य कदम पनि भने तर योजना कार्यन्वयनमा भने समस्या देखियो । यस विचमा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन वोर्डले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई सहुलियत ऋण दिने भनेर आवेदन माग गरयो ।
जसमा १८हजार ८३७ जनाले आवेदन पनि दिए । तर सहुलियत ऋण पाउनेको संख्या नाम मात्रको रहयो ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुलाई ऋण दिने भनेपनि यसमा धेरै समस्याहरु देखियो । आवेदन लिदा सबै अवस्थाहरु थाहा हुन नसक्दा प्रवासमा काम गरेर फर्केकाहरुले निकै उत्साहित भएर आवेदन दिए । तर सोचे जस्तो सहज थिएन सहुलियत ऋण पाउन यसले उत्साहित भएर आवेदन दिनेहरुलाई निराश बनाईदियो । यस विचमा वैदेशिक रोजगार बोर्डको आयोजना र रिटर्नी माईग्रेन्ट नेपालको सहकार्यमा
“वित्तिय साक्षरता तालिम” काठमाण्डौं सहित अन्य नवलपरासी र बुटवलमा सम्पन्न भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा तालिमलाई निरन्तरता दिईने हुदा यसले साक्षरता मिल्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका दिनबन्धु सुवेदीले वोर्डले विदेशमा जानेहरुलाई साक्षरता तालिमको साथै दुर्घटनामा परेका परिवारलाई क्षतिपूर्ति सहित फर्केकाहरुलाई पुर्नस्थापना गर्न काम गर्न लागेको बताए ।
बोर्ड अहिलेसम्म बैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुलाई उद्धार , जानेलाई साक्षरता तालिम , पिडित परिवारलाई सहायता दिन लागिपरेकोले उनको भनाई छ । पिडित परिवारलाई १२ कक्षासम्मको छात्रवृत्ति, १५ लाख सम्मको कानुनी सहायता , सात्वना सहित १० हजार सम्मको सहयोग संगै अब विदेशबाट फर्केकाहरुलाई ऋणको लागि वित्तियसाक्षरता दिइएको बताइएको छ ।
बैदेशिक रोजगारको सहित सरकारले सहुलियत कर्जाको लागि अनुदान सम्बन्धि एकिकृत कार्यविधि २०७५ मा यी व्यवस्था गरेको छ ।
व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा ५ करोड रुपैया सम्म
शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा ७ लाख रुपैंया सम्म
विदेशबाट फर्केका यूवा परियोजना कर्जा १० लाख रुपैया सम्म
महिला उधमशिलता कर्जा १५ लाख रुपैया सम्म
दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाख रुपैया सम्म
उच्च प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा ५ लाख रुपैया सम्म
भूकप्प पिडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जा ३ लाख रुपैंया सम्म
यही कार्यविधि मा रहेर वैदेशिक रोजगार बोर्डले आवेदन लियो । हजारौं वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट फर्केकाहरुले ऋण पाउने आशा त गरे तर योजना सरकारले चाहे जस्तो थिएन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका उप निर्देशक शुशील ज्ञवालीले कार्यविधि पुरा गरेका आवेदकले ऋण पाउन सक्ने बताए । धितो विनाको सहुलियत ऋण पाउने आधार न त्यति सजिलो थियो न पाउने आशा नै ।
के थियो कार्यविधिमा सहुलियत ऋण पाउन ?
वैदेशिक रोजगारमा गएको ३ वर्ष भन्दा कम भएको हुनु पर्ने ।
श्रम स्वीकृति लिएर काम गरेको हुनुपर्ने , काम गरेको अनुभव पत्र हुनु पर्ने ।
विदेशमा जे काम गरेको हो त्यही काम गर्ने प्रस्ताव हुनु पर्ने ।
अब यसलाई लिएर बैंकहरुको आफ्नै प्रकारको अर्थ पनि थियो । सहुलियत ऋणको नाममा जोखिम लिन बैंकहरु तयार नै थिएनन । यसकारण वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुलाई सहुलियत ऋण पाउने आधार तयार भएन ।
अर्कोतिर विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जाको साथमा सहुलियत कर्जामा ५ करोड सम्मको कृषि तथा पशुपन्क्षि कर्जा, महिला उधमशिलता, दलित ,व्यवसायिक शिक्षा, भुकम्प पिडित कर्जा जस्ता कर्जा साथमा थिए । विदेशबाट आउनेहरुलाई मात्र दिनुपर्ने छुट्टै व्यवस्था नहुदा बैंकहरुले कार्यविधि भन्दै अन्य कर्जा तिर जान सुझाव दिन्थे हुदा हुदै कर्जाको फाईल चाङमै थुप्रिने अवस्था आयो ।
कस्तो हो सहुलियत कर्जा ?
वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुलाई मात्र होईन अन्य क्षेत्रमा पनि सहुलियत कर्जा पाउने कुरा त थाहा नै भयो । यो पाउन निश्चित क्षेत्रले समेत हुने भएन पहँुचको कुरा त नेपालमा उठने नै भयो । निश्चित क्षेत्रको हितमा गरिने यस्तो कर्जा सहि ठाउमा भए त यसले देश विकास र उधमशिलतामा सहयोग गर्न सक्थ्यो । बैंकहरुले ३ देखि ५ प्रतिशत मै ऋण दिने भने पछि यसमा आकर्षण बढनु स्वभाविक नै हो ।
सरकारको नीति अन्तर्गत बैंकले ऋण दिदा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले ७.३७ प्रतिशत हुनेमा ५ प्रतिशत अनुदान दिदाँ २.३८ प्रतिशतमा सहुलियत ऋण दिने त्यसमा पनि महिलाले अरु १ प्रतिशत छुट पाउदा १.३८ प्रतिशत व्याजमै कर्जा पाउन सक्ने बैंकका कृषि तथा सामाजिक विभागका नारायण प्रसाद लामिछाने ले जानकारी दिए ।
अन्य बैंकको अवस्था अनुसार फरक पर्छ । अब यति सस्तो व्याजदरमा ऋण पाउन लागि नपर्ने कुरा नै भएन । यसमा बैदेशिक रोजगारको कुरा जोडिएपछि यसको लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डमा आवेदन पनि धेरै परेको थियो ।
विदेशबाट फर्केकाले पाउन सकिएला ?
बैंकले योजनाको ग्यारेन्टी मात्र होईन कार्यविधिको कुरा उठाएर वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुको आशा निराशामा बदलिदिएको छ । अर्कोतिर आवेदन दिनेहरुको पनि चित्त बुझ्दो र विश्वासिलो योजना नभएको बैंकहरुको दावी छ । सरकारले पैसा बाडने नभई खास योजना खोज्ने हुदा विदेशबाट फर्केकाहरुलाई सहुलियत ऋण पाउन गाहे भईरहेको रिटर्नी माईग्रेन्ट नेपालका अध्यक्ष उत्तम अधिकारीले बताए ।
विदेशबाट फर्केका खास योजना भएकाहरुलाई सहुलियत ऋण मार्फत उधमशिलता विकास गर्न लागि पर्ने अधिकारीको भनाई छ । अहिलेकै कार्यविधिमा रहेर सहुलियत ऋण पाउन गाह्«ो भएको हुदा यसको लागि अझ सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
हुनत एन एम वि बैंकले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका १हजार जनालाई सहुलियत ऋण दिने भनेको छ यो पनि कसरी कार्यान्वयन होला त्यो हेर्न बाँकी छ ।
विदेशबाट फर्केपछि व्यक्ति शुन्यताको अवस्थामा हुन्छ । एउटा व्यक्ति जसले विदेशमा आफ्नो श्रम बेचेर रगत र पसिना बगाएर देशमा रेमिटयान्स पठाएको छ । विदेशमा रहदाका समस्याहरु अनेक छन जसको रेमिटयान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेको छ ती प्रवासीहरुलाई पूर्नस्थापना गर्न सहुलियत ऋणमा प्राथमिकता संगै उनीहरुको सिप, पुजीलाई सही ठाउमा सदुपयोग गर्न राज्य जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ ।
प्रवासी श्रमिकले मजदुर युनियनमा आबद्द भई संघर्ष गर्नु पर्ने कारण
admin २७ पुष २०७५, शुक्रबार २२:११ 11th January 2019